Inkululeko Yokuzikhethela | Kusuka kuLinux
phico | | Okunye
Sanibonani zihlobo !. Bengizophawula ngendatshana «Ukudideka Kwamandla Okukhetha«, Kepha ngincamela ukubhala iposi, ngoba ngiyibheka indaba ebaluleke kakhulu. Ngeshwa, kuzofanele ngikhulume kancane - ngenhlanhla hhayi kakhulu - ngami.
Ngingowesilisa Odala Wemfashini. Ngokuqinisekile ngiphakathi kwabadala kakhulu abavakashela i-Fromlinux. Ngaqala, njengabaningi, ngo-1990 nge-MSDOS 3.0. Akekho umngane wami ngaleso sikhathi owayekhuluma "Ngokukhetha" uhlelo lokusebenza, ngoba "omunye" kwakuyi-UNIX. Ngingakuqinisekisa ngaphandle kokwesaba ukuthi uzokwenza iphutha, futhi ubonwe ngombono, ukuthi "Asizange sicabange nangokukhetha olunye uhlelo lokusebenza." Kwakuyi-MSDOS nokuningi, njengoba sisho eCuba.
Kwabe sekufika izinhlobo 4 (cishe akekho owasebenzisile); 5 no 6. Ngokuphazima kweso kwavela iWindows 3.0 enkundleni. Besingacabangi ngisho nokukhetha enye. Lapho lelo kwakuyiphupho langempela ukucabanga ngokuba nekhompyutha ekhaya. Sasikwazi ukufinyelela kuzo emsebenzini. Futhi-ke, ezinye izinkampani zazinamandla kakhulu kunezinye kuleyo ndaba.
Ngemuva kwalokho sithole iWindows 3.1. Ahhh, yeka ukuthi kuhle kanjani !!! Futhi besingakacabangi ngo "enye" ​​isistimu yokusebenza ngaphandle kwaleyo. Kakade ngaleso sikhathi, bekukhona "amalangabi abukhoma futhi aqondile" ikakhulukazi ezilimini ezihlelayo, abahleli bombhalo, amaspredishithi, nezinsiza noma iziphequluli zamafayela.
Ngakho-ke, isikhathi sihambile kwaze kwafika i-Windows 95 entsha (Izinguqulo A, B, C, SR2, njll.). Besingenawo amandla okuzikhethela. Asizange sicabange ngalokho. Mhlawumbe, uhlale ku-3.1 noma ku-3.0 noma kwi-MSDOS, kepha bonke bebeyiMicrosoft. Futhi kwenzeka okufanayo lapho iWindows 98 nezinguqulo zayo zivela.
Abanye bethu njengami baqala ukusebenzisa i-NT 4.0 kumaseva, kepha ezindaweni zethu zokusebenza zebhizinisi bekuyinselele enkulu ukuyifaka, ngoba abashayeli bebembalwa kwi-hardware ebesinayo. Kwakuyi-Complete Odyssey ukwenza i-NT 4.0. kunoma iyiphi i-hardware engenalo uphawu.
Lapho ngikunikeza isikrini esisodwa esiluhlaza okwesibhakabhaka ... ukuqala phansi. Kwesinye isikhathi imizamo engaphezu kwengu-4 noma engu-5, ngoba noku-oda kokufakwa kwabashayeli kube nomthelela. Noma kunjalo futhi konke, njengoba besingakwazi ukukhetha "omunye" -UNIX bekuseyigama elibi kithi, "Ososayensi bekhompyutha A ... the Force" -. Uma bekufanele sifake iseva, ngabe ufake i-NT 4.0 noma ubufuna i-hardware ehambisanayo. FUTHI SASIBALELA UKUTHI ISIMO NJENGENTO EJWAYELEKILE KANYE ASIKHALALANGA, FUCK !!!.
Sazabalaza ukufaka uNt obusisiwe. Unamandla, cha? Ngombono ngiyabona ukuthi besingenakho okunye esingakwenza. KwakunguNt noma uNt. IMicrosoft noma iMicrosoft. Windows noma iWindows.
Ungacabanga ukuthi NGAPHANDLE KWEMINYE INDLELA, sadlula kulokhu okuhlangenwe nakho okukhungathekisayo ezikhathini eziningi? Kusukela ekudutshulweni ngaba "yingcweti" ekufakweni kwe-Nt 4.0, kangangoba, esikhathini samahhala seWindows XP, njengoba umshini wami wokuqala kwakuyiPentium III enama-megabyte angama-512 kuphela we-RAM kanye nekhadi levidiyo le-NVidia elinama-megabyte angama-32 we-RAM, Ngafaka iNt 4.0 deluxe, njengoba ibhodi nekhadi kwakunabashayeli bayo. Iqembu elincane landiza no-Nt wabo, futhi ngangiziqhenya kakhulu ngakho futhi ngafundisa abangani indlela yokudlala umdlalo ofana ne-Doom. Madoda, lokhu kwenzeka ngonyaka we-2002.
UManzana?. Leyo software ye-hardware + yolimi-ne-groove ithengwe yizinkampani ezimbalwa kakhulu - zimbalwa ngempela - ezweni lami futhi ngakubona kamuva kusebenza kumakhompyutha ama-3 kuphela ezindaweni ezahlukahlukene.
Kwabe sekufika uchungechunge lweWindows 2000, lapho iMicrosoft, ibhekene neqiniso lokuthi izinkampani eziningi ezazivele sezithathe ithuba lokuya kwi-NT zazingeke "zithuthele" ziye ku-2000, ikakhulukazi ngenxa yezizathu zezomnotho, yethula inguqulo ka-2000 yeGolide ku ISpain, okucatshangwa ukuthi isuka kokuthi "Isivivinyo sezinsuku ezingama-90", lapho besisebenza ngokugcwele ngokuphelele unomphela. Uma ungazange "unikeze" i-2000 yakho, izinkampani ezimbalwa ngabe ziqale ukusebenzisa i-2000.
Kwabe sekufika iWindows Millennium. Ubumazi? Angikaze ngiyisebenzise.
Ngemuva kwalokho ngumlando wakamuva. I-XP yahlala esihlalweni sobukhosi iminyaka eminingi, futhi egatsheni leseva i-server ka-2003.
Kuze kwafika i-Vista, abasebenzisi abaningi bebenethezekile nge-XP. Sasihlala nezikrini zokufa eziluhlaza okwesibhakabhaka; ngokufaka i-OUR Xp yethu ngaso sonke isikhathi; Hack it izikhathi eziningi; ifake nge-antivirus noma ngaphandle kwayo; phila ulinde izibuyekezo; futhi ulisebenzise kakhulu. Ngisho nezinketho zazingaphezu kuka-90% ngaphakathi kweMicrosoft. Ubungeke ubaleke uma ukhipha izinyawo endaweni ye-Microsoft.
Kwathi ngabo-2006, kwaqhamuka uVista. IDrop egcwalise iNdebe.Ngibone abaningi befaka futhi bevelela ngaseXp ngejubane le-rocket yasemkhathini. Ngabona abaningi bezama Ubuntu 6.06. Abanye bahlala, abanye babuyela eXp. Njalo lapho ngifunda umagazini, ama-90% ama-athikili kwakufanele "angithengisele" uVista. Yilapho-ke lapho ngakhathala khona ukuchitha umsebenzi.
Wayesevele "edlalile" noSuse, Mandrake, noRed Hat. Kuzo ngiphuthelwe yiHhovisi ngaphezu kwanoma yini enye kanye nolimi lwami lwe-Visual FoxPro 6.0. Yebo, wayengumqambi we-database. Bengine-Suse ku-hard drive eyodwa ne-Xp kwenye. Kepha akukho okunye okusetshenzisiwe i-Xp.
Bengiqala ukuba nezinketho. Ngangivele sengizikhethela, ngilahle !!!
NgoJulayi 1, 2006, ngosizo lomngani wami u- "El Freake" uJulito Cesar, owayengazise kuMessers. Suse nabanye, ngafaka uhlelo KUPHELA ku-Pentium III yami entsha sha esine-1 gigabyte ye-RAM, I-Old Debian 3.0 "Sarge".
NGIKHETHA ngokukhululeka lapho nganginenketho yangempela nengokoqobo yokwenza lokho. Futhi ngendlela ngikhethe ubumfihlo obuningi.
Ezinsukwini ezimbili kamuva ngamemezela ukuthi "i-hardware yami ngeke iphinde ibone iWindows", futhi ibilokhu ikhona futhi izoba yinde uma iLinux ikhona. Nsuku zonke ngisebenzisa iWindows engaphansi kweyodwa. Vele, njengoDebian omuhle, ngazama i-Ubuntus 6.06, 7.10, 8.04, 10.04 ne-11, futhi isikhathi ngasinye ngangibuyela ngokushesha ku-My Old Debian. Manje ngisebenzisa i-Squeeze noma i-Wheeze kuphela ngokukhetha kwami ​​mahhala eziteshini zami zokusebenza. Nginama-server ane-Etch, Lenny and Squeeze.
Ngisebenzisa iDebian ngokuzikhethela ngaphandle kwenani elikhulu lama-distros laphaya. Ngenelisekile ngoDebian. Umhlaba we-Debian ungifanele.
Manje, kungani ama-Linux distros amaningi kangaka? Akungenxa yokuthi kuyagcwaliseka kancane kancane ukuthi "noma ngubani angenza iLinux yakhe"? Kuyisimanga, angithi? Noma kungcono ukuqhubeka nokuhlala ehlathini lesihlahla esisodwa? Ngabe thina esikhetha iLinux kufanele siphile ngokujabula njengalabo abangaboni ngaphesheya kwamakhala abo, njengoba kusho ingoma yaseCuba?
* Zingaki izinhlobo zezimoto ezikhona?
* Zingaki izindawo zokudlela eMexico City, noma eBuenos Aires noma eMadrid?
* Mangaki amakhulu abesifazane esinakho lapho sizokhetha umlingani wethu?
* Futhi imibuzo engaphezulu kwesigamu mayelana nokuthi mingaki… kukhona… kukhona…
"IPower of Choice ihambisana noMpilo uqobo." Ukuphazamiseka kwempilo kungaba ukugcina ukuhleleka kwezinto njengalapho besingasebenzisa iMicrosoft kuphela. Ngakho-ke ungabe usangicika ngalelo zinyo lokudideka lapho ukhetha, njengoba besho eBuen Cubano, okuhunyushwe ngokuthi "Ungabe usangibulala ngaleyo ngxoxo ye-strabismic yokudideka lapho ukhetha." 🙂
Isakhiwo seLinux distros sisebenza kahle uma usibuka kahle. Uma wena, mngane wami, ulahlekile kancane uma kukhulunywa ngokukhetha kwakho, khetha izihlahla eziyizimpande: I-Debian, i-Red Hat, i-Slackware, nabanye abambalwa. Bangama- "Classics" okubabiza ngenye indlela. Yibona "Abadala" abasaphila futhi abaphilile, futhi abenze inzalo enempilo neningi. Uma kungenjalo, vakashela izingosi ezinikeza ama-distros asetshenziswa kakhulu nyangazonke nonyaka bese ukhetha eyodwa yazo. Uma kungenjalo, phuma uzenzele owakho.
Uma kungenjalo, vakashela iFreeBSD noma enye indawo ye-BSD bese ukhetha. Qaphela ukuthi ngikunikeze izinketho ezimbalwa zokuqala. Uma kungenjalo, ngicabanga ukuthi uchitha isikhathi sakho ufunda le ndatshana bese usebenzisa iWindows noma i-Apple. Ngakolunye uhlangothi, i-Android, i-Nokia, i-Black Berry, futhi ngiyazi ukuthi mingaki eminye imikhiqizo, futhi cishe yonke indawo entsha yamadivayisi amancane wezinhloso ezehlukene asevele ekhona, athwala i-Linux emathunjini awo.
Akekho umuntu ongalahleka ehlathini le-Linux uma, uma engabaza, ebuyela ezihlahleni zezimpande! Imigwaqo ibekiwe kahle. Isoftware, njenganoma ikuphi okunye ukwenziwa komuntu, ayihlukile kwi-Common Sense.
Kuzo zonke izimo ozikhethile, mngani wami, jabula kakhulu udle intendele isikhathi esisele.
Sengathi isihlahla esisodwa singasivimbela ekuboneni ihlathi!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » Inkululeko Yokuzikhethela
Amazwana ayi-84, shiya okwakho
Ngaqala nge-ZX81 cishe ngokufana, ngo-1994 ngaqala ukuzinika amakhekhe nge-Slackware! nekhadi lemidwebo yesithathu ... kuze kube ngo-1996 angikwazanga ukufaka i-linux ...
Uphuthelwe ukubeka isithombe sehlathi…. lapho unayo:
Kuyathakazelisa ukubamba ama-distros nokuwabona ku-Vbox…. manje ngibona amanye ama-SID we-debian aphekwe ngaphambili ayamangalisa. Isifaki sesinye sazo singishayise umoya ... ngicabanga ukuthi lesi sase-Italy ... YEBO
Okuthunyelwe okumangalisayo, angimdala njengawe kepha ngithathe umsebenzi wokuhlola ukuvela kwezinhlelo zeMicrosoft kusuka ekufakeni i-3.11 nama-diskette ayo ayi-14 kuya kulokho namuhla, okufanayo ku-linux, ngikhumbula i-slackware yami yokuqala engu-6 .. . Ngalezo zinsuku lol kwangithatha isonto ukwazi ukuthi kufanele ngisebenzise i- "startx" ukuqhuba imvelo futhi ngifaka kahle, impela ngangingenakho ukuxhumana ngaleso sikhathi ukucinga noma yini uu
Okuthunyelwe okuhle. Jabulela
I-athikili ethakazelisa kakhulu, sihambe izindlela ezifanayo, ngaqala mhlawumbe eminyakeni embalwa kamuva. Ngalolu daba bengihlala nginemizwa exubekile, ngakolunye uhlangothi ngibona ukuthi akunakwenzeka ukubeka iminyango enkundleni, ukuba yisoftware yamahhala kusho ukuthi wonke umuntu angakha ukusatshalaliswa okusha ukwengeza kuhlu olude kakhulu lwezikhona. Kepha ngakolunye uhlangothi, ngiyavuma futhi ukuthi izicelo zekhwalithi ziyashoda futhi kunamadeski amaningi nokusatshalaliswa, ngaphezu kokwabelana, ngoba ngikuphile enyameni yami, umbono wokuthi inani eleqile lezinketho lidala ukukhubazeka okuthile nokunganeliseki uma kukhulunywa Ukukhetha.
Kungakho ngithola umnikelo wakho uthakazelisa kakhulu, ikakhulukazi ngomqondo owodwa: ukukhetha ukwabiwa kwe- "trunk" kunciphisa izinketho futhi mhlawumbe kusize ukunganqumi kwaphakade ukukhetha. Ngoba, ngikusho ngokwazi, ukungatholi uhlelo olungaguquki kungakhathaza, ngokomzimba nangokwengqondo, kulabo abangakwenzi ukuzijabulisa.
Siyabonga ngokuphawula !!! Kimi kucindezela kakhulu ukushintsha ukusatshalaliswa, ngisho nemvelo yedeskithophu. Kungakho ngincoma ukuqala ngeMsuka. Uma kamuva ufuna ukukhuphuka amagatsha, siyakuhalalisela futhi. Kepha qala ekuqaleni, ikakhulukazi uma isebenza kahle kakhulu, futhi unolwazi lomsebenzi weminyaka eminingi. Okuhlangenwe nakho akukwazi ukushaywa indiva.
Kushiwo kahle kakhulu, ngiyavumelana nomyalezo oyinhloko wokuthunyelwe. Ngicabanga ukuthi kufanele ubheke okuthile okukwenza ukhiqize futhi ungachithi isikhathi uzama i-distro ngayinye esiza lapho singenaso isikhathi sayo.
Ngaqala ngoSlax (ngoba ngangingenayo ikhompyutha yami), ngakho-ke kwakuyiSlackware yonke. ISlackware eqinile futhi ebhorekayo (ene-KDE ngakho angichithi isikhathi ukusetha ukubukeka neminye imininingwane), lokho kunginika isikhathi sokusebenza ngempela. Ezinyangeni ezimbalwa ngenxa yelukuluku ngazama i-Arch, i-Chakra ne-Ububtu, kepha kube yikho konke.
Ukubingelela nokuphila isikhathi eside inkululeko yokuzikhethela!
Okuthunyelwe kuhle kakhulu, futhi yize ngingakuhluphekanga njengawe, kuyiqiniso ukuthi, noma ngabe yini imbangela, kunezinhlobo eziningi ze-gnu.linux, futhi kuyinhlekelele.
unokuningi ongakhetha kukho, kepha kulapho kulele khona usizi. Kuyinto efana nokuthi "ukwedlulela kolwazi, kudala ulwazi olungaziwa"
kepha hhe, izinto eziningi zihlobene….
Ngicabanga ukuthi ekujuleni kwazo zonke ziyafana, iqiniso ukuthi akunzima kimi ukushintsha ngisuke kwelinye i-distro ngiye kwelinye, okungenani endaweni yedeskithophu uhlala unezinhlelo ezifanayo. Ukushintshela kusuka ku-distro eyodwa kuya kwenye akusho inkinga enkulu.
I-athikili / ukuphawula okuhle kakhulu kepha iqiniso ukuthi ngiyazi iLinux kusukela cishe ngo-1998, okuyilapho ngangena khona eyunivesithi futhi ngangilokhu ngihehwa u-Unix, ikhehla lami lalingumsebenzisi onentshiseko engisalikhumbula amashumi amathathu alo ... noma ngisho amashumi amane ... amadiski amasistimu aguquguqukayo ayenesifaki sesistimu yesine engangizuza njengefa kamuva, futhi impela ngabizwa ngeMinix neLinux eningi, ngamafuphi, ubuhle bokuba nezinguqulo eziningi kangaka akugcini lapho kodwa futhi nawe uneLinux kuma-routers, i-NAS nezinye izinhlelo eziningi ezishumekiwe ongakhetha kuzo, lokho ubuhle, ongakwazi ukubaphatha nge-console kuphela kepha nangesixhumi esibonakalayo, i-SSH noma iwebhu, kubi kakhulu ukuthi lapho wenza izibuyekezo uye esihogweni , ukuphela kwento engikhathazayo, imikhonzo.
Uma usebenzisa i-hardware kusuka kumikhiqizo efana ne-NVIDIA, i-ATI / AMD kanye / noma i-Broadcom, kusobala ukuthi iningi lama-distros azoshayeka kusibuyekezo sokuqala sokuqala; kepha uma usebenzisa ama-mainboard we-Intel ayi-100% ane-Altheros chipset, ungahle ube ngcono (ngaphandle kokuthi usebenzise ama-mediocre distros afana no-Ubuntu, ashayisa isibuyekezo sokuqala sokuqala).
Anginankinga ngeDebian Stable PC yami, njengoba uhlelo lwayo lwe- "apt-get" lulungiselelwe ukuthi lukwazi ukubuyekeza kusuka ku-kernel ngaphandle kokuthinta amafayela akho noma ukukuvimbela ekufinyeleleni amafayela akho.
I-toshiba yami endala ene-amd turion 64 × 2 iyiqiniso, ngama-distros athile iyakhathaza.
Okuthunyelwe okuhle, yize bengingenakho okunzima njengakwakho, kepha ngivumelana neVista, kwaphela izinyanga ezintathu kwi-PC yami yamanje futhi ngabuyela ku-XP ngenkathi nginezinye izingxenye ze-Ubuntu, engangizisebenzisa kaningi, ngaphandle kwemidlalo (ye ngakho-ke izintandokazi zami (eyodwa ibingasebenzi ngaphansi kwewayini) futhi besengivele ngineminyaka emi-3 ngaphandle kwale XP ngaphandle kwe-Virtualbox uma kwenzeka ngelinye ilanga ngiphatha uhlelo lwami oluncane ePython.
Ukukhetha kuyamangalisa, kepha uma kukhulunywa nge-GNU / Linux, inobuhle nobubi bayo.
Esikhathini esithile esidlule, ngicabanga ngendaba, ngishicilele iposi elinesihloko esithi: «Ukwehlukaniswa kwesoftware yamahhala». Yize imfishane impela, ngincamela ukushiya isixhumanisi uma kungenzeka sikuthakazelise.
Ngiyabonga nonke ngemibono yenu.
Uyabona ukuthi imbewu ithele izithelo.
Yebo, angizange ngihlupheke kakhulu njengawe, kepha ngiyakwazi ukutshela isilevu ngomlando wami emhlabeni wamakhompyutha.
Njengoba ngangineminyaka eyi-10 ubudala, uma ngikhumbula kahle, ngangisebenzisa windows kodwa okwenzeka kuphela ngewindows efunwayo kanye namawindows amaningi ngenkathi izinhlobo ezintsha zamawindi zisondela, omunye wahlabeka umxhwele kakhulu, okokuqala ngaqala ngamawindows vista kwabe XP bese amawindi 7 ngaze ngasala.
Ngibe sengibona iLinux kwikhompyutha yomfowethu futhi ngiyithandile leyo ndlela yokusebenza futhi ngaqala ukusebenzisa iLinux kuze kube manje ekuqaleni kwakunzima kakhulu ukunquma phakathi kokusabalalisa okuningi okwakukhona ngakho ngazama okunye ngaze ngathanda okukodwa okunguBuntu. kuze kube namuhla ngisebenzisa iLinux.-
Ngemuva kokusebenzisa ama-distros amaningi nginqume kokuthile okuzinzile, kulapho engaqala khona ukusebenzisa i-Debian futhi le nguqulo ye Wheezy ingimangazile.
Ngingasho ngokuphepha ukuthi sengivele ngiyitholile i-distro yami yokugcina.
Bengilokhu ngiyisebenzisa selokhu kwaphuma inguqulo engu-5.0 (uLenny, ukucacisa). Ngokusobala, i-Wheezy ingukuphakanyiswa kobuso okuphelele ngoba ikhwalithi yayo iphakeme ngokuphelele, futhi ifaka nezinhlelo zokusebenza ukuze abasebenzisi abasha bazizwe bekhululekile ngale distro.
Ekugcineni ukukhanya kobuhlakani ebumnyameni bokungenelela kwezobuchwepheshe lapho sihlala khona lapho wonke umuntu ekholelwa ukuthi banemibono efanelekile.
Shareando okuthunyelwe kuyo yonke inetha 😉
Ukukhuluma iqiniso, okuhamba phambili kokuthunyelwe maqondana nokukhethwa kwe-GNU / Linux distros. Ngiqale ngeMandrake 9 ngaqhubeka nge-Debian 5, okucacile ukuthi ngiyithuthukisele kwinguqulo 7 futhi ngijabule kakhulu ngesinqumo sami.
Kukhetha ukukhetha ama- "matrix" distros ngaphambi kokuzisola ngesinqumo esibi. Ngalokho ngisho konke.
Ngaqala nge-XP ukuthi konke okumele kushiwo kwakumnandi .. kepha kunjalo .. ngangazi ukuthi izinhlelo ze-linux zazizungeza ... kepha nganginovalo lokukuzama futhi okuthile kwakuzophuka ... kungazi kanjani ... kuze kuphele iminyaka .. nginqume ukuzama i-LIVE ubuntu ... futhi nginqamula iminwe yami ... ukufaka ...
Ngayifaka ndawonye i-xp futhi amehlo ami avuleka ..
Ngingagcina ngikhululekile ... manje ngisebenzisa ubuntu noma i-linux mint ... kepha uma kufanele ngivuselele ifoni ... kufanele ngisebenzise win7.
I-PS kumlingani wami ... osebenzise i-win7 ngafaka i-linux mint ... wayengakholiseki kakhulu ... futhi manje uyangibonga nsuku zonke ngokuyifaka.
Julio Cesar kusho
I-athikili enhle kakhulu umlingani wami uFreeke futhi ngiyabonga ngokusho igama lami elinye ivoti lenkululeko yokuzikhethela
Ngiyabonga, El Freake !!!
ngibonga uVista ngazile ngeLinux xD
Silingana, noma ngiqhubeka nokuyisebenzisa, ngifunde ukuthoba le nguqulo yeWindows (noma kunjalo, ayihlukile kakhulu ngeWindows 7, okuvela ukuthi icishe ifane ngokuya ngokusebenza).
Noma kunjalo, ngenxa yeVista ngazana noDebian.
Eqinisweni, ngine-Vista SP2 kwi-PC yami ukugwema izibuyekezo ezicasulayo zeWindows 7. Ekugcineni, icishe ifane neWindows 7, kuphela kuyindida kakhulu ngezimvume futhi kuma-AMD kuyenyanyeka impela.
Yebo, kunoma yikuphi kukhona ama-distros anginike ikhanda elilinganayo noma elingaphezulu kune-Vista ngakho-ke njengoba i-blogger isho ngenhla kungcono ukusebenzisa kuphela ama-distros amakhulu (futhi ngincoma ukungasebenzisi ukukhishwa okukhiphayo, ulwazi lwami)
Ungangitsheli nge-Arch kimi, ibhukwana futhi ibukhali kakhulu kimi.
Noma kunjalo, ngithanda ama-distros afana ne-Slackware ne-Debian (ngihlale no-Debian kanye ne-Slackware, angikaze ngiyisebenzise kuma-PC abonakalayo).
Yize ngingeyena umuntu wakudala njengomuntu engisebenza naye, ngingasho ukuthi indaba yami icishe ifane naleyo yombhali.
Kusukela ngisemncane kakhulu nganginentshisekelo emhlabeni wezobuchwepheshe bekhompyutha kanye nolwazi, njengoba ngaqala ukusebenzisa iWindows 95 neWindows 3.11, kusukela ukusetshenziswa kokuqala engangikwenza kuyo kwakuyimidlalo yangaleso sikhathi efana noMario Bros. noPrince wasePheresiya. Ngibe sengisebenzisa iWindows 98 nge-Office 97/2000 esikoleni samabanga aphakeme, futhi iqiniso ukuthi ngangikhangwa kakhulu yi-OSX kune-Windows, ngoba leyo kwakuyindlela yokusebenza eyavela kakhulu kumabhayisikobho aseMelika. Ngangikwazi ukusebenzisa iWindows ME / 2000, kepha banginaka ngoba ukunyakaza kwesikhombisi kwakucishe kube ama-FPS angama-30 uma kuqhathaniswa ne-24 FPS eyakhombisa ku-Windows 3.11 / 95/98.
Ngokufika kweWindows XP, kwaqala isikhathi segolide seMicrosoft, kwaba isikhathi eside ukuthi ngikwazi ukuba nePC yami (kwakuyiPentium II eneWindows 98, kanti ezinye zazisebenza nePentium 4, yanginika okwanele Isikhathi sokuhlola ngokujulile uhlelo lweMicrosoft) futhi ngikwazile ukufunda inkumbulo yami ye-USB; Ngisanda kuzama i-distro yami yokuqala ye-GNU / Linux: Mandrake 9, engizoyizonda ngokuhamba kancane kwayo. Ngo-2008, ngisanda kwazi iWindows Vista neHhovisi 2007, ngoba isikole samabanga aphakeme ebengifunda kuso sasifakwe leyo software. Ngiwuthandile umsebenzi wobuciko weWindows Aero, kepha ngangikuzonda ukusebenza kwe-kernel (ngaleso sikhathi, babene-RTM futhi kwakungekho neze isivinini esanele se-inthanethi ukufaka i-SP1 kuso futhi lapho ngathola uDebian Lenny, owangikhanga ngokulula kwe-GNOME 2 nange-Iceweasel).
Maphakathi nonyaka ka-2010, lapho ngangisengumfundi we-pre-university academy, nganginelukuluku lokuzama Ubuntu, i-distro ye-GNU / Linux enawo wonke ama-PC afakiwe. Ngaleso sikhathi, Ubuntu babumuhle, kepha buye bancipha kancane kancane ikhwalithi yabo yokucubungula .deb amaphakheji angenze ngabuyela kuDebian.
Yize ngiphawula kakhulu ngivela kwiWindows, kungenxa yokuthi ngeshwa ezweni engihlala kulo ukusetshenziswa kwesoftware ephathelene (i-CorelDRAW, i-Photoshop, i-Flash) sekugxile kakhulu, ngaphandle kwalokho ngivame ukuzama amachweba wezinhlelo ze-GNU / Linux zeWindows njengeTransmission-QT noma i-UGet kuze kube manje ibe yinhle kimi, angivamisile ukusho okufanayo ngezinye izinhlelo zokuthengisa eziye zalahlekelwa ukusebenza kwazo kancane kancane. Nge-Debian ngithole ukukhanya okushoyo, ngoba ikwazile ukuxazulula izidingo zami eziyisisekelo (bukela amavidiyo, ube nesivinini esihlaba umxhwele, ukuhlela imultimedia nge-Ardor neMixxx ...) futhi, ngenhlanhla, ngithole izinhlelo eziningi ezingisizile hlala noDebian hhayi kwenye i-distro.
Ngemuva kwakho konke, ngisasebenzisa i-Dualboot ngezizathu engizishilo ngaphambili, kepha angikakunakanga ukwahlukanisa kwami ​​noDebian. Ngiyethemba ukuthi baya kuma-distros akhulile njengoDebian no-RHEL / CentOS kunokuba bangene ngqo kwamanye ama-distros bese belahleka endleleni.
Kunokuthile okungikhathaza ngokomqondo esihlokweni sakho. Ngingayincoma kanjani i-trunk distro kumuntu oqhamuka kwiWindows? Ngingathanda ukukwazi ukuncoma uDebian kubaba wami, kepha akathandi ukwenza amathanga amaningi ukwenza izinto ezimbalwa afuna ukuzenza emshinini wakhe (izinto angazenza ngokuphelele kwiLinux njengokusebenzisa i-libreoffice, ukubuka ama-movie ku-VLC). Okwamanje okuwukuphela kwe-linux ayisebenzisayo yiselula yakhe ye-android.
Ngendlela engiqonde ngayo. Ukuhlolwa kwe-Debian kunginikeza konke engikudingayo, futhi ubufakazi obuhle kakhulu balokhu ukuthi ngisinde ekukhishweni kwayo bese konke ukufuduka kusuka eceleni kuya ekuhlolweni. Kusukela ngoJanuwari, ngisebenzisa iWindows kuphela nge-desktop eyihlane (ngenxa yezizathu zomsebenzi), kepha hhayi emshinini wami.
Uxolo, khohlwa ngeMint. Ubuntu noMint bayinzalo kaDebian. UFedora ovela kuRed Hat ne-OpenSuSe kusuka kwaSuse Linnux. Uyazi angisakhumbuli ukuthi uSuse wazalwa ezimele noma cha?
IMint inguqulo epholishiwe ye-Ubuntu, nokuthi ikhiphe inguqulo esuselwe ngqo ku-Debian Testing iyenza iqhubekele phambili kakhulu ezimisweni zokuqala ze-Ubuntu (inhlonipho ngomsebenzisi wesoftware yamahhala neyokuphathelene).
Okwamanje, iSlackware ayinayo imfoloko enesithunzi yokuyimela, kepha maduze nje.
Sanibonani diazepan !!!. Ukufakwa kwe-Wheezy cishe kulandela okulandelayo -> okulandelayo. Ngiyincoma kunoma ngubani. Noma, ngincoma kubaba wakho Ubuntu, okuthi noma ngabe kukhona ukugxekwa okwenziwe muva nje, kuseseSoftware yamahhala. Yebo, ngokwazi kwami. Noma i-Fedora noma i-OpenSuse. Angikuniki okunye okunye okukhethwa kukho kokuqala. Ubuntu bunqamule ukukhishwa kweWindows ngokufakwa kuqala kuma-hardware ahlukahlukene. ISystem 76 iyisibonelo.
Ngiyabonga ngezimpendulo. Angisabuthi nawe.
Mngani, awusoze wakhafula. Ngokuphambene nalokho. 🙂
Uma ufuna ukugwema izinkinga zephakeji, ngiphakamisa ukuthi kusetshenziswe iStable Debian. Iqinile futhi inokwethenjelwa kakhulu kunezinye izinhlobo, noma ngabe inkinga yenguqulo ye-Iceweasel ingaxazululwa ngokubheka i-mozilla.debian.net.
Ngiyakutshela ngingumnikazi wamanje we-laptop 76 yesistimu eza kuqala ifakwe i-Ubuntu, okwathi uma ngiyivula ngaphandle kwebhokisi into yokuqala engayenza ukususa Ubuntu nokufaka i-Arch Linux
Kukulungele ukukhetha i-distro enokusebenza okungcono kwephakeji kune-Ubuntu.
@diazepan uma ubeka (ngokwesibonelo) iDebian ezinzile efakwe nguwe, nazo zonke izinhlelo zokusebenza nokulungiswa akudingayo ukuze kumfanele, uzothola umbono omuhle, bese uchaza nje ukuthi ungazifaka kanjani futhi uzikhiphe kanjani izinto ezithile. Ungamphoqi ukuba afunde ngezinto ezingamenza ayeke ukuyisebenzisa (njengokufakwa okugcwele).
Kumuntu oqhamuka kwiWindows futhi ofuna ukunethezeka, kungcono ukuthi omunye umuntu afake iLinux futhi abamyale, hhayi yena ukuthi azenzele yena, noma ngabe kulula kangakanani.
hehehe iposi elihle, lenza ukufunda kube lula futhi kube kusha kakhulu, kube injabulo emehlweni ami. Ngenkathi ngibhala "Ukudideka kwamandla ukukhetha", ngangifuna ukugqamisa ukukhathazeka ngaphezu kokukhetha okujwayelekile, futhi njengoba lokhu kuyibhulogi yeLinux, bekulingwa ukukwazi ukuqhathanisa nokuqhathaniswa nenye yezinkinga ezinkulu / "izibusiso" zale SO emangalisayo.
Njengoba ngiphikisile phambilini futhi ngiyasho futhi, asikwazi ukungazinaki ukuthi ukhetho lusisinda kanjani, futhi ezimweni eziningi lusenza sizizwe kabi uma sinamaphutha, ngokunembile ngoba ayikho indlela yokwenza iphutha. Ngikhumbula ukufaniswa okuhle mayelana nokubekwa kwamanani entengo, engxenyeni yezitolo zamaketanga lapho ngaphezu kwezintengo ezijwayelekile zama-TV, ngokwesibonelo, babeka eyodwa enenani eliphakeme kakhulu, ukuthi ngenhloso eyodwa yokudideka, umthengi ojwayelekile azi ukuthi awusoze wakwazi ukuthenga i-TV efana naleyo, uyithenga ngentengo ephansi, kepha isaphezulu kunalokho obekuhlosile ekuqaleni. Inkinga yenkululeko nokhetho ihlale iyinkimbinkimbi; Mina, njengabaningi benu, ngiyajabula ukuba nezinketho, kepha mhlawumbe akulona iqiniso, ukuthi kungamangalisa ukuthi eminingi yale misebenzi izosizana. Ngazi amaphrojekthi we-distros, avela njengomphumela wokungaqondani okuthile nonjiniyela, noma iqiniso lokuwadala ngoba vele uwashiye, ushiye iphakethe elisha, abalandeli abangajabule, ... noma kunjalo.
Ukusebenzisa ingqondo abanye bangacabanga 😉
Ukuzithoba kwami ​​nokuzithoba kwami ​​dannlinx !!!. Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula.
Kuyangithinta ukuthi uDebian wanelise lapho usuyekile ukudlala ku-PC.
Kunezinketho eziningi ezingaba khona ezingeni elifanayo nezwe elizimele elenza ukuthi ukuthuthela ku-Linux kwenzeke. Kungaba lula kumuntu ngaphambi kweGeneration X ukuyiguqula ngokubanika izinketho zeHhovisi neziphequluli ezinhle, kepha kulabo beGeneration X lapha, abangabadlali bamageyimu, noma abazinikele ngokuphelele ekwakhiweni kwemidwebo yobungcweti, basenayo kunzima ukuhambisa ngokugcwele.
Ngivela kwaGen Y, kepha ngizizwa ngifana noGen Z (noma iGeneration).
Ezinsizeni eziningi, emkhakheni wokudweba imidwebo, amathuluzi kwezinye izimo ajwayele ukuba mbumbulu, kepha ukuba nemibono eyisisekelo njengokuphatha ipeni lokudweba ngamaveector kuphela e-Inkscape, kungaphezu kokwanele.
Kunoma ikuphi, kuyindlela enhle ukufundisa isoftware yamahhala yemidwebo yokugwema ukuthembela kusoftware ephathelene. Manje, ngiyethemba ukuthi i-Inkscape yamukele indinganiso ye-PANTONE yamaphrinta (ngisho i-Adobe efile izokhipha izindinganiso zawo zombala).
I-athikili enhle kakhulu 🙂
Ngokuqondene nokukhethwa kokusatshalaliswa, mathupha bekuhlale kubonakala kimi ukuthi into ebaluleke kakhulu ukuthi amaphakheji aphathwa futhi adalwa kanjani, yikho okunika "ubuntu" ku-base distro ethile.
Ngalo mqondo, okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu engikuthole nge-archlinux ne-chakra nge-pacman ne-PKGBUILD yayo 🙂
Ngenhlanhla kusekhona abantu abanjengoFico, okuthi ngalesi sihloko esihle kakhulu akhumbuze abaningi ngalokho, ngokusobala, kwesinye isikhathi okukhohlwayo. Nami ngingoweqembu elifanayo lomakadebona ababengenayo enye indlela; Mina, ngaqala ngo-1987 nge-Olivetti M10 eyayingeyona i-100% IBM ehambisanayo futhi kwakuyinkinga enkulu kunesixazululo sokuyisebenzisa, ngabe sengidlula kukho konke okuvelayo: IBM XT, AT, 386, njll. . size sifinyelele kulokho esinakho namuhla. Ngalesi sikhathi nangesikhathi eside, ngisebenzisa uKubuntu, okungivila omuhle, okungigcina ngijabule nokuthi ngincoma labo abathanda ukunethezeka futhi abangathandi ukubambeka kukhonsoli. Ngeshwa kufanele ngibe ne-multiboot (ene-XP ne-7), ngoba yilokho okusetshenziswa amaklayenti ami futhi anginakho okunye ukuzikhethela, kepha ngokwami, ngiye ohlangothini olumnyama, bekungukukhetha engikwazi ngijabule kakhulu.
Sanibonani nonke. Nginomngane omdala kunami, oyiTremendous Designer. Ungitshela - futhi ngesizathu esizwakalayo - ukuthi umndeni wePremiere awunakulingana, nokuthi wazalwa no-Apple. Okufanayo kuya kusoftware ye-Autodesk. Yiminyaka EMININGI yesipiliyoni ekwakhiweni kwemifanekiso; ukwakhiwa okusizwayo noma i-CAD; ukucutshungulwa kwamavidiyo, njll. Ungitshele ukuthi i-GIMP ilungile nokuthi iBlender isebenza kahle kakhulu. Ngicabanga ukuthi kancane kancane sizokwazi ukubona izinhlelo zokusebenza ezifana neBrisCAD -Kungasese- emhlabeni weLinux. Ngicabanga ukuthi kuzoba yisinqumo sabakhiqizi ekugcineni.
Manje, ungaphikisani nalabo abasebenzisa i-Premiere pirated noma i-Autodesk, futhi funa imikhiqizo efanayo yeSoftware efanayo ngokushesha.
Into edabukisa kakhulu ngaleli cala ukuthi iningi lalabo abasebenzisa le software ephathekayo ephathekayo abayisebenzisi ngisho ne-5% yamandla alo futhi bangaba ngaphezu kweGimp noma enye isoftware yamahhala, kepha cha, ukuba yi-super-mega- Umklami we-ultra kumele abe ne-Adobe version yakamuva; Angisho ukuthi kuyindaba yomngane wakho, kodwa ngeshwa KUNGOKWENZEKA kwabasebenzisi abaningi ...
Eminyakeni eminingana edlule ngabhala okuthunyelwe mayelana nenguqulo yakamuva yemfashini. Nganoma yimuphi umzuzu ngizokwenza futhi, ngaphandle kokufuna ukucasula labo abahlushwa i- "versionitis" nhlobo :-). I-1000% Vumelana nawe, uCharlie-Brown !!!.
Yebo, kimi, angikaze ngigcine iziphequluli nama-plugins abo esesikhathini njenge-flash player. Futhi, ngisenayo i-Adobe's CS4 suite, enikeza inkululeko ethe xaxa yoku-oda amathuluzi. Kunoma ikuphi, angikaze ngilubone ushintsho kumathuluzi akho selokhu ngafunda ngezinhlelo zakho ngasekupheleni kweminyaka yama-90.
Futhi AKUKHO icala lomngane wami. Leyondoda endala isebenzisa izinhlobo ezindala, ezizinzile eseyazi ngekhanda. Futhi yeka ukuthi ulunge kangakanani entweni yakhe! 🙂
HAHAHA ... lapho-ke kubonakala sengathi ukusebenzisa izinhlobo zakudala esezivivinyiwe kuyisici salabo "abadala" abazibophezele kwezokuphepha kunokuthi "kube yinto entsha"; Futhi ungakhathazeki, faka i-athikili yakho ku- "versionitis", okuthi noma ingahle ibhoboze ezinye, ngokuqinisekile izosiza kithi sonke ...
Amathuluzi amaningi wokuqamba imidwebo ahluka kancane komunye nomunye ngokwendlela yabo yokusebenza, kepha maqondana noshintsho lwangempela olwenzeka kunguqulo ngayinye yohlelo ngalunye njengeCorelDraw, ikakhulu kungenxa yokwanda kwezifanekiso kanye namathuluzi okusiza. ngaphezu kokuphakanyiswa kobuso ngokuya kwesixhumi esibonakalayo njengoba kunjalo nge-suite yonke ye-Adobe lapho ifika ku-CS4, ekugcineni kungenzeka ukugcina ukusethwa kwendawo yamathuluzi, ngaphezu kokukwazi ukukhetha phakathi kokusetha ngaphambilini unayo.
Ngamafuphi, into ebaluleke kakhulu akuyona ithuluzi uqobo lwalo, kodwa ukuthi wazi kanjani ukuthi ulisebenzisa kanjani.
Izwi lakhe yisilinganiso Master Valdes, akukho okunye okuyiqiniso ngaphezu kwalokhu okubhalile kubhulogi. Manje ngase nginombono wami wesibili wekhompuyutha ephathekayo, yayivela efektri nayo futhi njengoba yayinenqama yememori engu-1 ye-giaga yayihamba kancane, kuze kube yilapho esitobhini somthengisi ngathola inguqulo yokubuka i-sp1 ne-voila! yayingasheshi njenge-xp, kepha yayigwinya, futhi ayizange iqalekise i-bill ne-combo yayo kakhulu. Njengamanje ngine-vit engilethe ngayo evela efektri, kepha ngama-gigs amabili wenqama futhi iyashesha futhi ayinginikanga izinkinga, kepha isagwinya inkumbulo eningi.
Ngine-Vista SP2 yezilimi eziningi, futhi ngibona nje umehluko ngeWindows 7. Kuzo zonke izimo, iWindows ayilungile ngokusebenzisa izinsiza, kepha kungcono kunokusekela i-OSX engazinzile ne-interface yayo ye-Aqua esebenzisa kabili kuneWindows Aero, futhi ngaphezu kwalokho, ishayisa kaningi kakhulu kune-Windows GUIs.
Siyabonga ngokuhlola kwakho !!!
Ingazinzi kangako ukuthi ngenyanga ilenga kanye kuphela, ngenxa yesikhathi esisheshayo se-XDDDDDDD
Bitch Ngiyacela: bukela amavidiyo ahlukahlukene e-YouTube ngeFlash Player naku-HD ngeSafari noma ngeFirefox. Ake sibone ukuthi i-interface iphendula kanjani ngokwezinsizakusebenza.
Manje, ngeWindows Vista kwi-PC eyenzelwe ukugembula inokusebenza okufana ne-Windows 7, ngoba inezinhlamvu okungenani ezimbalwa zephrosesa ye-Intel Core i7 engakwazi ngayo ukucubungula ngokushesha ukuchichima kwesixhumi esibonakalayo se-Aero / Basic has.
NgeFirefox kwiWindows, kubuhlungu ngempela kuma-tarballs, njengoba izwakala isinda kakhulu uma iqhathaniswa ne-GNU / Linux. Noma kunjalo, sifana ne-QuickTime.
Bah # Ngiyavuma ukuthi angibanga nankinga ngenkathi ngidlala amavidiyo ku-Windows, kunoma iyiphi inguqulo, isoftware ka-Apple angiyisebenzisi ngoba iyesabeka, ngincamela ukusebenzisa ama-codec noma i-VLC efanayo ukudlala amavidiyo, ne-FF (I ngiyayizonda i-Chrome) kodwa nge-FB engenza ngihambe kancane ngokuvuselelwa kwe- «feed» kepha ngokuhamba kwesikhathi ngize ngiqale ukubona amadokhumentari wesiteshi se-History okusobala ukuthi asisaveli kuleso siteshi ngakho…. futhi lokhu ngikwenza ku-lappie yami endala ene-Windows 8, ngeshwa angikwazi ukusho okufanayo ngeLinux ngoba yenze ukusetshenziswa kwe-CPU kwanda futhi kwavele kwafudumeza okufanayo, ngiyacabanga ukuthi nalapha inkinga yabashayeli be-ATI, kodwa hey ngesinye sezizathu sokuthi ngiyeke ukusebenzisa i-Linux kwideskithophu.
Ngisebenzisa i-VLC kakhulu ukubuka ama-movie ami kune-QuickTime, engiyisebenzisa njengesikhuthazi ukuhlela nge-After Effects ne-Premiere CS4.
I-Apple ayisebenzi ngalutho uma kuziwa ekwakheni izinhlelo zeWindows, yingakho ngikhubaza izibuyekezo zazo ngoba zikufanele ngempela ukunqanyulwa futhi i-Adobe kufanele isebenzise i-VLC esikhundleni se-QuickTime.
U-Elio ngivumelana nawe, i-Apple ... kahle ngeke ngisho okuningi ngoba umngani wami pandev angathukuthela hahahaha, kepha ngivuna ifomethi ye-.mov ngingasho ukuthi lapho sengirekhode ividiyo yekhonsathi ne-iPhone yami futhi nge-Galaxy Ace yami, i-iPhone ibe nekhwalithi engcono yomsindo nevidiyo, ngicabanga ukuthi lokhu kungenxa yekhwalithi yedivayisi eyi-Ace, noma ikuphi ukuphela kwento evela ku-Apple engiyisebenzisayo futhi empeleni into kuphela okufanele bazinikele kuyo, ukwenza amafoni hahahahaha, okuhlanganisiwe kulokhu ukuthi ukube bekungekhona ukugqashuka kwejele ngabe anginabo futhi into ye-iTunes ... khulu ukubuyekeza kwabo kukhulu kakhulu ukuthi bayavilapha ngempela ukulanda, ngikhumbula isikhathi lapho ingavumelaniswa neWinamp.
Futhi, angisebenzisi ihadiwe ye-NVIDIA noma ye-ATI / AMD, ngoba ngibe nesipiliyoni esibi sokushiswa kwekhadi lami levidiyo le-ATI Raedon selifakiwe ku-Windows, ngakho-ke ngakhetha ukusebenzisa i-Intel (i-NVIDIA ibiza kakhulu futhi ayinikezi ball ku-GNU / Linux, futhi esikhundleni sokunikeza i-Hardware kumphakathi we-GNU / Linux njengoba abaningi babecabanga lapho i-NVIDIA itholwa yi-Intel, yavalwa kakhulu futhi ngeshwa yinto engazwakalanga).
I-Intel ayikaze ithenge indoda yeNVidia… .. kepha uma ihluzo zakho zishisiwe kungenxa yokuthi… i-hmm elungisiwe i-motherboard yakho ilungile i-Intel? Ngisho i-MOBO yonke, angibhekisi ku-chipset kuphela, futhi iqiniso ukuthi ama-Intel MOBOs ayenyanyeka, sengibone izinkumbulo eziyikhulu kanye nama-GPU athosiwe ngenxa yama-MOBOs, yingakho ngingabancomi , kahle uma kuyizitha ezimbi kakhulu i-LOL.
Kunoma ikuphi, yilokho okwenze impilo yami yaba nzima, ngoba i-lappie yami yokuqala yayine-NVidia GPU futhi umshayeli wayo weLinux wayemuhle, ayikaze inginike izinkinga, engingakwazi ukusho nge-ATI, abayinikezi nokuncane Ukubaluleka kweLinux futhi ngicabanga ukuthi yingakho izinto zibe zimbi kakhulu kule lappie yami eseneminyaka emithathu manje.
Kungcono uzitholele i-iPod Touch njengoba ishibhile kakhulu futhi nekhwalithi yevidiyo ifana ne-iPhone.
Noma kunjalo, ngine-Android yami futhi ngineWinamp efakiwe, uhlelo oluhle kakhulu uma kukhulunywa ngokuvumelanisa izingoma, ngaphezu kwe-SHOUTcast engineziteshi engizithandayo (ngibuhlungu ukuthi inguqulo ye-Android ayisekeli i-AAC, bekungaba okuhle vele Yileyondlela engilalele ngayo iziteshi zami ezinjengeRadio Insomnio ezikuleyo fomethi yokusakaza, futhi ilula kakhulu kune-MP3 futhi nekhwalithi lilingana nayo).
I-mainboard engisebenzise ngayo lelo khadi levidiyo bekuyi-Elitegroup, engcono kune-Intel uqobo. Manje, nginesiteshi sokusebenzela esincane se-HP Compaq DC7700 esisebenza kahle ngeVista neDebian Wheezy (ngisho neLenovo nochungechunge lwayo lwe-ThinkCentre ne-ThinkPad ne-HP yenza amabhodi aphambili angcono kune-Intel uqobo, ukuthembeka).
I-Pfff ukuthi iqiniso ukuthi i-Intel ayazi ukuthi ingawakha kanjani amabhodi womama kude kakhulu, kepha angazi, kulezi zikhathi akukho mkhiqizo owenza i-hardware yayo, ngisho ne-Apple efanayo (cr), ngoba ngiyazi ukuthi kukhona amakhompyutha we-HP ngama-MOBOs, iMSI noma i-Asus, ngisho ngiyakhumbula ngenkathi ngithenga okokushisa kwami ​​kokuqala kwakungu-HP (10x10x32x) futhi lapho ngiyivula ngaphakathi kwakuyi-Sony hahaha yonke namanje ngisenayo ilele nxazonke.
Ngokuqondene ne-iPod ... neeeh uma ngithenga i-iPod kungaba yi-nano ukuyisebenzisa njenge-smartwatch akukho okunye, ngizolile ngama "ayfons" ami futhi angiphuthelwa yi-Android ngoba nginayo kwi-tablet hehehehehe, kepha ngiyithanda kakhulu i-HTC One.
@Cocolio: Lowo oshaya i-Intel ekwenzeni ama-boardboard amakhulu yiFoxconn, engingakwazi nokulingisa iSlackware ngeVirtualBox kuWindows (ize yenze iWindows 7 ibukeke icishe ifane neWindows Vista).
Hahaha okhubazekile, yingakho ngincamela ukusebenzisa imali ephindwe kayinkulungwane ku-hardware enhle, ngiyakutshela ngoba eminyakeni edlule selokhu ngathenga ikhadi le-DFI NFII eline-Athlon XP 2800+ enama-gig ama-2 kwi-RAM, i-AGP NVidia (hhayi mina ngiyavuma i-chip) i-128 Mb futhi isebenza kahle kakhulu, lowo mshini okwamanje unama-Windows 7 ama-SP1 32 bits ngokusobala, futhi iyaqhubeka nokulinganisa, isibuyekezo sokugcina engisinike sona bekungu-2006, kunjalo isivele ithathelwe indawo i-i7 920 ene-12 kwi-RAM kanye ne-NVidia GT 220 GPU ne-MOBO Asus P6t, uma kungibize kakhulu kodwa bekuhamba sonke lesi sikhathi ngaphandle kokunikeza izinkinga, ngakho-ke kungcono ukusebenzisa imali ethe xaxa entweni ezuzisayo.
URodrigo Prieto kusho
Kube yisikhathi eside ngifunde okuthile engivume kakhulu ngakho. Ngiyakuqonda ukuthi kulabo abasanda kuqala emhlabeni weLinux kungadida, kepha konke okusha kuyadida! Nami ngivela kusizukulwane se-DOS futhi ngiyakhumbula lapho ngiqala ukusebenzisa windows 3.1, kwabonakala… kuyindida. Ukukhononda ngamathuba wokukhetha… .. kungenzeka kithi abasebenzisi be-Linux. Njengoba sisho e-Argentina "khononda ngokugcwele"
Phendula uRodrigo Prieto
Ngiyabonga futhi futhi ngemibono yenu !!!
Ngicabanga ukuthi kudingekile ukuvusa amazwi awo wonke ama-Linux e-OldFashion ukuze kuzuze amasha. Ifa lethu ukuze, ngemuva, bangasikhombisi njengabantu abakhohlakele noma abanobugovu. Ngamunye ngokwesipiliyoni SAKHE ukulithulula ngenhlonipho nangaphandle kovalo.
Ngenkathi ngiqala ku-GNU / Linux, ngangazi ngeRed Hat neSlackware kuphela. I-distro yami yokuqala kwakunguMandrake 9, eyayilungile ekuqaleni kepha yayihamba kancane ngamaphakheji. Ngibe sengiqhubeka noDebian Lenny, ongenelisile futhi ngiwubuyekeze nge-DVD1 yenguqulo ngayinye, futhi yenze kangcono kakhulu kune-Windows (ubeka iDVD1, uyalinda ukuthi ibone idiski, ubhale «Apt-get update" kanye "apt-get upgrade" ne-voila: I-Debian ibuyekeziwe).
Hahaha, mhlawumbe ngiqale ngeMandrake.
UDaniel Bertúa kusho
Okuthunyelwe okuhle kakhulu, siyakuhalalisela.
UY, ngivela ngaleso sikhathi, ngaqala ngamakhompyutha emuva ngonyaka we-1992.
Umshini wami wokuqala bekuyi-286 ene-16 Mb ye-RAM ne-52 Mb Hard Drive, enekhadi levidiyo le-512 Mb ISA:
Ngikhumbula i-W 3.0, bekubonakala njenge-basophy uma kuqhathaniswa neMacintoch Classics enesizotha kakhulu.
Izinhlamvu eziku-W 3.0 zazibukeka zimbi, kwakungekho i-WYSIWYG futhi kwakudingeka ucabange ukuthi izinhlamvu zazizophrintwa kanjani.
Ngo-3.1 kwafika izinhlamvu ze-TTF nezinto zashintsha.
Angizukuqhubeka nokulandisa ukuzidela kwami ​​ngeWindows, usuvele wenze okungaphezulu kokuhle kodwa ngizokwengeza, ukuthi ngaleso sikhathi ezweni lami kwakungekho i-Intanethi, into esondele kakhulu kwakuyi-BBS (kuphela yendoda endala ekhumbulekayo kakhulu) , lapho sixhume khona sisebenzisa imodemu nenethiwekhi yocingo, konke kumodi yombhalo.
Ngesinye isikhathi ngazinikezela kwiTechnical Service for Windows imishini (3.1, 95, 98, ME, XP), ngisebenzela abantu ababheka iWindows KANZIMA KAKHULU yingakho bekhokhela ama-Technicians. Lokhu kwenzelwa labo abathi iWindows ilula futhi i-Linux inzima. ANGIKE ngisebenzise noma ngifake izinguqulo ngemuva kwe-XP, ngehla lapho futhi ANGIKE ngifune ukubuyela kulezo zindawo, ngaphandle kweminye imishini.
Izindaba zami zokuqala zothando ngeLinux zibuyele ku-SuSE 6.3, engiyithenge ebhokisini, enama-CD angama-6 nezincwajana.
Ngibe sengidabula iDebian Potato, iMandrake, iKnoppix, ngaze ngaphuma Ubuntu, kepha angikaze ngisebenzise Ubuntu, lapho ngiya kulelo gatsha, laya eKubuntu, ngoba ngihlala ngiyithanda iKDE.
Ukusatshalaliswa kokuqala okungivumele ukuthi ngijabulele iLinux kusukela ekuqaleni, ngaphandle kwamadrama, ngaphandle kokuhlukumezeka, ngaphandle kwezinkinga, ngaphandle kwezimfihlakalo, bekuyiLinux MINT, ngizohlala ngiyikhumbula ngalokho.
Ukusatshalaliswa kwami ​​okukhulu nguKubuntu, ngifunde ukukulungiselela futhi ngakusebenzisa.
NgineNkampani Yokuphrinta, engakaze ifudukele eLinux, ngoba NGAZALWA nge-LINUX neFree Software futhi NEVER kudiski yayo bekukhona imininingwane eyodwa ngeWindows ne-Closed and Private Software.
Emishinini YAMI nasezintweni ZAMI ngisebenzisa i-Free Software ngaphansi kweLinux, futhi angisebenzisi ukuzama noma yini yezinguqulo ezintsha zeWindows, ngoba nje ANGITHAKAZI, ANGANGENZELI LUTHO ngakho-ke bayi-ANTI-ECONOMIC futhi COUNTERPRODUCTIVE, ngoba bazophazamisa isikhathi okufanele ngifunde ukusebenzisa i-Free Software, kepha ngifuna, lapho ngifuna khona, lapho ngifuna nalokho engikufunayo, kumishini eyi-1 noma eyi-1000 futhi njalo ku-HONEST, PROFESSIONAL kanye ne-100% LEGITIMATE indlela.
Mayelana nokuhlukahluka okuningi kanye / noma ukusatshalaliswa kweLinux, ngisho nami ngikhuthaziwe ukuthi ngihlanganise ukuhlanganiswa kwabakwa-Graphic Designers nama-Printers abizwa ngeKubuntu 13.04 DiGra.
Ungabona imininingwane ngakho lapha:
Akukho okunye, imikhonzo futhi siyafunda.
Phendula uDaniel Bertúa
Umbuzo: Ngabe usebenzisa i-GIMP neKrita neScribus noma i-Inkscape? Kusukela nge-GIMP, amathuluzi ahlelekile ukubuyisa izithombe (ngeScribus ne-Inkscape angibanga nankinga yokuzivumelanisa nokuphathwa kwazo).
U-Elio bheka i-blog yakhe, iqiniso ukuthi ngilingwa ukulanda i-hehehehe
Sengivele ngibonile, ngoba ngilondoloze isifufula engxenyeni yami yeWindows Vista ukuze ngiyilande kamuva kuDebian Wheezy yami nakho konke ukuthula kwengqondo emhlabeni (yize kwanele kimi ukuthi ngibe ne-GIMP eduze ne-Inkscape ne-Scribus, kodwa Ngisadinga ukufaka iJashaka ne-AVIDEMUX yokuhlela ividiyo).
Futhi yebo, ngisebenzisa i-Chromium ku-Windows ngoba i-Google Chrome ayisabekezeleleki nge-Pepper Flash, i-plugin yayo yokuphrinta / yokufunda i-PDF ne-Google Update ebambezela iWindows yami.
Ngisebenzisa i-GIMP, i-KRITA cishe lutho, ngiyisebenzisela ukuguqula imidwebo ibe yi-CMYK, ngize ngibone ukuthi i-SCRIBUS ingayenza lapho ithumela ngaphandle njenge- "PDF yephrinta", inika amandla ukubola ku-CMYK kuMbhalo wonke, ngaphezu kwendawo imibala uma kunesidingo.
Engikusebenzisa kakhulu emshinini wami wokuphrinta, ngokumangazayo, yiLibre Office DRAW, yize kusobala ngezinto eziqondile nezilula (amaflaya, amakhadi, amaspredishithi, amavoti, amarisidi, njll.), Ngoba iyashesha futhi iyahlukahluka.
ISCRIBUS sezinto eziyinkimbinkimbi ezidinga ukubola kombala, umbhalo omningi, njll.
INKSCAPE yalokho okuyimidwebo, ubujamo, amalogo, imiphumela eyinkimbinkimbi yezithunzi, okuvelele, njll.
Ukusetshenziswa kwami ​​kwe-GIMP kuyinto eyisisekelo, ukunqampuna, ukuguqula ukukhanya, umehluko, njll. nokunye okuncane kakhulu.
Ku-BLOG noma ku-Facebook Group kunamasampula we-CONCRETE ne-REAL works, hhayi nje i-theory, engaba yisibonelo esingcono sokusetshenziswa engikunikeza uhlelo ngalunye.
I-Inkscape ne-Scribus zibukeka njengokufakwa esikhundleni esifanele kwe-CorelDraw ne-InDesign. Futhi, angikaze ngicabange ukuthi uKrita wayefana ngempela ne-Adobe Illustrator ngenxa yoku-oda kwamathuluzi ayo. I-GIMP entula ukupholisha amathuluzi okwenza kube lula ukuphatha.
Noma kunjalo, ukuthi ungenza imiklamo emihle ngesoftware yamahhala, unga.
Ukuphawula okuhle kakhulu, mngani uDaniel Bertúa !!!. Abantu abanjengawe benza umhlaba we-Linux ube mkhulu.
SONKE sifunde KONKE.
SONKE sikhulisa UMHLABA weLinux neFree Software, ngalokho esikwaziyo nalokho okufinyeleleka kumakhono ethu.
UJose Al kusho
Okubhalile kuyangishukumisela, kubonakala kufana nesifundo sempilo kunesihloko sesayensi yekhompyutha haha
Phendula uJose Al
Siyabonga ngokuphawula kwakho !!!. I-Informatics, ukwenziwa koMuntu, INGXENYE YOKUPHILA futhi bekungeke kube khona ngaphandle kwayo, okungenani njengoba sazi.
Umagazini we-TuxInfo # 59 uyatholakala
Ukulungiswa Kwesistimu: Ungayenza kanjani i-chroot